GAAFFIIF DEEBII HAADHA MANA WALIIN TAASIFAME =========KUTAA LAMMAFFAA========= OROOLYAANAA VIIWU MIIDIYAA (OVM) – Beekan Guluma Erena
GAAFFIIF DEEBII HAADHA MANA WALIIN TAASIFAME =========KUTAA LAMMAFFAA========= OROOLYAANAA VIIWU MIIDIYAA (OVM)	Beekan Erena
Poems May 21, 2016OROMO
19SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
GAAFFIIF DEEBII HAADHA MANA WALIIN TAASIFAME
OROOLYAANAA VIIWU MIIDIYAA (OVM)
Gaaffif deebii kanaaf Eeyyamamuu keef guddaa si galateeffanna , yeroo darbee Abba Manaa kee waliin gaaffif deebi taasifnee turre, karaa isaa waan jiru lafa kahee jira ,, ati ammoo deebii kee keennu qabda jechuudhaanin si afeere.
Hordoftoota keenya akka hin nuffisifneef jecha gabaabatti yaada ke lafa kaa’i.
HAADHA MANAA: Ana afeeru keesssanif Galatomaa, Miidiyaalen warri kan isaati yaada isaa qofa dhiyessu namni midhama koo uummatati baase hin jiru,,,isayyu soba kan isaan gabaasaan.
Jalqaba Abbaa Manaa koo miti, Abbaa Manaa jechuun kan ati filaatte ,itti heerumtudha inni garuu dhufee Abbaa Mana koo waan meeqa walin dabarsanii dhufan Narraa Ari’ee Natti gale, isa Akkasiin Abbaa manaa jechuu hin danda’u.
Erga wal fuune ji’a 25n fiixnee jirra guyyaa tokko walii gallee hin beeknu, Gaaffi tokko gaafachuni hin danda’u, waa’e mirga koo gaafannaan na reeba , sii dudgda duuba nama nagaa koo hin barbannetu jira isaantu natti si kakaasa jedha, ( Ana dugda Duubaa, Goorroo Manaa Qofaatu jira), Yoo barbaade Obboletti isaa QAALLITTI jirtu biraa na kaa’a, takka ZIWAAY Essuma isaa bira, Obbolessa isaa QILINXOO jiru biratti na erga isaanis warra akka isatiti, waan inni jedhe amanani na gidirsu.
Amma isa dhuma kan irratti wal lolle Lafa koo an itti rakkadhee Waggaaf Jaarraa meeqaaf qabadhee taa’e ana Harkaa fuudhee ormaaf keennuf kahe, hin tahun jedhen,,,amma isaaa dhumaa nan diidee, akka inni mana kootti ol hin seennef balbala koo nan cuufe..Xuuwwe,Okkotee, Beddee,Shinii, Moonyee, Mana keessaa walitti guureen ittin karaa mana koo cuufuuf yaale. hiriiyota akkaa isaa Guurratee dhufee ana nama homaa of harkaa hin qabne,,,,kan nyaachise isaa Bashaase na reebe ijoolle koo warra isa jibban lafa inni geesse amma yoona kana waanan beeku hin qabu, Ijoollota koo tahani warra isa jalaa figaan waan xinnoo afaan diibe cal jechisise , warri diidan garuu narraa fagaatan.
Kan biraan waan baayyen godheef jedhe Odeeffata, kan nama dinqisisu firottan isaaf malee anaaf waan godhe hin qabu. Osoo inni humnaan natti hin galiin kana caalaan jiraadhan ture, firoottan isaa garuu qabeenya kootin hanga isaan mataatti ol bahani natti fincaa’anitti qubsee ofirratti nyaachaa narra jiraatu, aniif ijoollen koo manaaf qe’ee keenya keessatti mirga dubbachu illee hin qabnu.
OVM: Gidduttan si Kuta!!Oduu amma nu qaqqabeen Abbaan manaa kee dhiifama ( namni ati waa’ee isaa natti hima jirtu kun) Dhiifama naaf haa gootu balleessen jira .Miidhaan irraan gaheefis Gatiin baasa jechaa jira, me kana irratti maal jetta?
HAADHA MANAA : kat kat kat ki ki ki ( Kolfa dheeraa) “Osoon gubadhun kolfa” jette Akaawwin jedhan, Dhifamaa? Lakki inni homa hin ballessina maloo maalif dhifama jedha, ana kan ballesse hooti, gatii isaas hin barbaadu , Yoo dandahee ijoolle koo narraa fageesse naaf haa deebisu, Warra qarshiin hin biitne, Xoobbota ko Warra isa baqatani badan, naaf haa deebisu kana achi homaa hin fedhu, dhifama godhus dhisuus lafan dhaqu hin qabu, isuma jalan jira, hanga guyyaan dhufee furmaata naaf kennutti.
OVM: – Dhuma irratti dhaamsa maali qabda? Carraan siif keenna.
HAADHA MANAA: Ijoollota ko warra kaanin Tokko tahaati namicha kana mana koo keessaa baasaa, osoon hin du’in furmata tokko naf kennaa , booda hin gaabbitu, warri isaa jala fiigdan ammo inni yeroof malee booda isinitti galagaluun isaa hin haafu, anuma Haadha keessan isiinif wayya jechun barbaada.
OVM: Kabajamtota hordoftota qophii OVM gaaffif deebi kana haala yeroof jecha akkasiin gabaabsinee, dhiyessinee jirra Haadha manaa Midhaamte kanaaf tokko tahaati Birmaadhaafin dhaamsa keenya. Ulfaadhaa.
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa19SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
NATTI TOLA TURE- Oroliyana Daniel →